Clarabridge: Nghọta a na -eme eme eme site na mmekọrịta onye ahịa ọ bụla Martech Zone
Ka atụmanya ndị ahịa maka ọrụ ndị ahịa na -abawanye, ụlọ ọrụ ga -emerịrị ihe iji hụ na ahụmịhe ndị ahịa ha ka dabara.
90% nke ndị America na -atụle ọrụ ndị ahịa mgbe ha na -ekpebi ma ha ga -azụ ahịa na ụlọ ọrụ.
Ọ nwere ike isi ike ikwupụta ebumnobi a n'ihi na ọnụ ọgụgụ nzaghachi dịnụ nwere ike ịkarị akarị, na -ebute ahụmịhe ndị ahịa (CX) ndị otu ga -echefu nghọta na ihe metụtara mmekọrịta onye ahịa ọ bụla. Site na mmụba na -abawanye, òtù dị iche iche na ụlọ ọrụ na -atụgharị nyiwe njikwa ahụmịhe ndị ahịa iji nyochaa mmekorita ndị ahịa wee kpughee ozi nwere ike ịkọwa mmelite ngwaahịa, melite mbọ ahịa na ịkwalite iguzosi ike n'ihe ndị ahịa ogologo oge.
Njikwa Ahụmịhe Ndị Ahịa
Ndị na -ahazi na -ama jijiji na nzaghachi ndị ahịa - petabytes nke data n'ụdị oku ekwentị na ndekọ ederede, ndetu ndị nnọchi anya, nyocha ịntanetị, njikọ aka, ozi nkata, ozi ịntanetị na nyocha.
N'ime mmekorita na nzaghachi ndị a, ndị ahịa na -ekwupụta echiche, mmetụta ma ọ bụ nsogbu metụtara ahụmịhe ha na ngwaahịa, ika ma ọ bụ nzukọ, yana ebumnuche ha maka iru. A na -ejikwa ọtụtụ data a dị ka isi mmalite nghọta na asọmpi. A na -echekwa ya na nnukwu ọdịyo ma ọ bụ faịlụ ederede, nke ngwaọrụ ọgụgụ isi azụmaahịa ọdịnala anaghị enyocha ngwa ngwa nke emebere iji jikwaa data ahaziri dịka ọnụọgụ na ndepụta.
Clarabridge, onye na -eweta usoro njikwa ahụmịhe ndị ahịa (CEM), na -arụ ọrụ na ụfọdụ ụdị ụwa dị ka USAA, Vera Bradley na United, iji kpochapụ ọgba aghara na mgbagwoju anya nke nzaghachi ndị ahịa. Site na AI ya, Clarabridge na-ejikọ nzaghachi ndị ahịa na mkparịta ụka n'ime otu oghere zuru oke nke enwere ike nyochaa site na iji Clarabridge kacha mma klaasị na nyocha okwu yana nghọta oge na-ekesa maka ndị nwere mkpa n'ofe nzukọ a.
Dị ka Salesforce's State of the Connected Customer report si kwuo, 80% nke ndị ahịa na -ekwu ahụmịhe ahụ azụmaahịa na -enye dị oke mkpa dị ka ngwaahịa na ọrụ ya. N'iburu nke a n'uche, ọ nweghị ihe ụlọ ọrụ gị na -ere ma ọ bụ na -enye, ahụmịhe ndị ahịa na -agaghị echefu echefu na -emetụta ọrụ niile. Maka nke a, Clarabridge na -arụ ọrụ na ụlọ akụ na ụlọ ọrụ ego, ndị nlekọta ahụike na ndị na -eweta mkpuchi, ngwongwo ndị ahịa, ụlọ ahịa, mgbasa ozi na teknụzụ, na njem na ile ọbịa. Ndị ahịa gụnyere SharkNinja, Nationwide, Adobe na Crate & Barrel.
Nchịkọta Clarabridge: Inyocha ahịrịokwu ọ bụla maka ịga nke ọma CX
Iji nyere aka mee ka ahụmịhe ndị ahịa kacha mma, ndị ahịa Clarabridge nwere ohere ịnweta ụzọ abụọ: Clarabridge Analytics na Clarabridge Engage. Site Nchịkọta Clarabridge, ụlọ ọrụ nwere ike gafere nhazi asụsụ (NLP), mmetụta na nhazi data iji tụọ mbọ, mmetụta, ebumnuche na nyocha ihe kpatara ya site na iji usoro iwu na mmụta igwe na-abịaru AI nso.
Gịnị mere nke a ji dị mkpa? Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe iberibe na teknụzụ iji nyochaa ụfọdụ data a mana ha enweghị azịza zuru oke iji ghọta mmetụta, nyocha isiokwu, nchọpụta isiokwu, ike mmetụta ma ọ bụ akara mgbalị. Clarabridge na -enyocha ozi a niile iji nye echiche zuru oke nke onye ahịa. Clarabridge na -enyere ụlọ ọrụ aka ime nke a n'ụzọ atọ:
Ngwakọta, nyocha omnichannel - Ọ bụghị ogologo oge gara aga, ndị ahịa nwere naanị ụzọ ole na ole iji ruo akara. Ugbu a, ndị ahịa nwere ike ịnweta ụdị aha n'oge ọ bụla. Ma ọ bụ oku, ozi ịntanetị, nkata, nyocha, mmekọrịta mmekọrịta, ọkwa na nyocha ma ọ bụ nzukọ, ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ihe ha ga -eso. Maka nnukwu ọgbakọ nwere ike inwe ọtụtụ ọnọdụ gburugburu ụwa, gụnyere ọtụtụ ebe ịkpọtụrụ, ịnweta ohere ọ bụla na ndị ahịa bụ ihe ịma aka. Iji nyere aka nakọta nzaghachi ndị ahịa niile n'otu ebe, Clarabridge na -ejikọ ya na ọtụtụ narị isi mmalite, gụnyere WhatsApp, Twitter, Facebook, ndekọ oku, ozi ịntanetị na ndị ọzọ.
Nchịkọta ederede - NLP bụ ikike mmemme kọmpụta iji nyochaa okwu mmadụ iji chọpụta asụsụ, ihe ụtọasụsụ, ụlọ ọrụ - dị ka aha, ebe na akara - mkpụrụokwu na okwu metụtara asụsụ n'ime ahịrịokwu. NLP bụ ihe dị mkpa n'ịghọta nnukwu data ka ọ na -enye nhazi maka ederede buru ibu ka enwere ike nyochaa ya maka isiokwu, isiokwu, usoro na usoro okwu ndị ọzọ gafee ọtụtụ nde mmekọrịta. Clarabridge na -ewere nyocha data otu nzọ ụkwụ n'ihu site na ịgbakwunye nghọta asụsụ okike (NLU). NLU na -achọ ịghọta ma nweta ihe sitere n'asụsụ mmadụ. Usoro NLU na -enyocha okwu, nkebi ahịrịokwu na onodu iji nyochaa isiokwu, mmetụta, mmetụta, mbọ na njirimara okwu ndị ọzọ. NLU bụ ihe na -akwalite nyocha ederede. Site na NLU, ụlọ ọrụ na-enweta nghọta ka mma n'ihe ndị ahịa na-ekwu maka ya, na-achịkọta isiokwu ọnụ maka nyocha dị mfe, na-eduga na mkpebi ngwa ngwa maka ahụmịhe ndị ahịa kacha mma.
Personalization - N'agbanyeghị ngalaba, Clarabridge na -eme ka ọ dịrị ndị otu mfe imepụta dashboard ahaziri iche, na -adọta ozi ngalaba chọrọ n'otu ebe maka ịnweta ngwa ngwa na nghọta ngwa ngwa. Site n'inwe dashboard ahaziri iche, ngalaba gafee ụlọ ọrụ nwere ike kerịta nghọta wee gbanwee ha ka ha rụọ ọrụ. Nke a dị mkpa ebe ndị ahịa na -atụ anya ịhụ mgbanwe emere ngwa ngwa - ọ bụghị n'ime ụbọchị ma ọ bụ ọnwa ole na ole.
Clarabridge na -etinye aka: izute ndị ahịa ebe ha nọ
Ka ọtụtụ ọwa dijitalụ na-apụta, ndị ahịa na-atụ anya ka ụlọ ọrụ nwee nkwurịta okwu ozugbo. Nke a dị mfe ikwu karịa ime eme. Idebe ọtụtụ mkparịta ụka, n'ofe ọtụtụ nyiwe na mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị nnọchi anya, siri ike.
site Clarabridge na -etinye aka, ụlọ ọrụ nwere ike jikọọ ndị ahịa ebe ha nọ ma nye ahụmịhe ndị ahịa dị elu na ntinye aka site na ikpo okwu mkparịta ụka etiti. Ikpo okwu na -enuba mkparịta ụka site na ọtụtụ ọwa mmekọrịta n'ịntanetị yana ọwa nkwukọrịta asynchronous gụnyere Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, SMS, WeChat, email, ọkwa na nyocha, nzukọ ịntanetị, blọọgụ na ihe ndị ọzọ, na -enye ohere ka ụlọ ọrụ na -akparịta ụka n'ụzọ dị mfe, zaghachi ma tinye ndị ahịa na ọwa ndị ahịa na -eji. Otu ikpo okwu etiti pụtara na ndị otu ọrụ nwere ike ịlele ozi niile na -abata, nweta akụkọ mkparịta ụka maka onodu ma jikọta mkparịta ụka n'ofe ọwa. A na -akpado mkparịta ụka akpaghị aka na ozi gbasara isiokwu, mbọ, mmetụta na ihe ndị ọzọ. Clarabridge na -enyere ụlọ ọrụ aka isoro ndị ahịa na -emekọrịta ihe nke ọma n'ụzọ atọ dị iche iche:
Jiri igbe mbata jikọtara ọnụ zaa ajụjụ gị - Site na ịnweta ọtụtụ ọwa dị iche iche, ọ ga -ekwe omume na onye ahịa nwere ike ịkpọtụrụ otu nzukọ n'elu otu ikpo okwu. Nke a na -emepụta ihe ịma aka nye ndị otu iji soro arịrịọ na mkparịta ụka dị iche iche sitere n'aka onye ahịa. Inwe igbe mbata jikọtara ọnụ na -enye ohere ka ndị otu nkwado ndị ahịa hụ mkparịta ụka gara aga ka ha nwee ike ghọta nke ọma arịrịọ onye ahịa. Nke a na -enyekwa aka izere ịkpasu onye ahịa iwe nke nwere ike ịkọrọla onye nnọchi anya ọzọ iwe ha. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịkwadebe otu dị iche iche site n'inwe nzaghachi tupu mkpọ, ndebiri nke ntuziaka mbipụta yana atụmatụ nsogbu na-enye ha ohere ịhazi maka ihe mberede mberede.
Nyochaa SLA zuru oke -Nkwekọrịta ọkwa ọkwa (SLA) nọ ebe iji hụ na ịdị mma, nnweta na ibu ọrụ. Agbanyeghị, nleba anya SLA nwere ike isi ike ma ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ndị ọrụ, nke na -emekarị. Iji melite usoro nlekọta ndị ahịa, dị ka nkezi oge njikwa (AHT) n'otu ikpe, ọnụego kọntaktị mbụ (FCR) yana ọsọ azịza, ndị otu ga -enwerịrị ohere ịnweta ozi niile n'otu ebe ma nwee nghọta doro anya ogologo oge onye ahịa nwere. nọ na -eche. Njirimara nchedo Clarabridge na -agwa ndị otu ogologo oge onye ahịa cherere azịza ka ndị nnọchi anya ghara ịla oge nzaghachi SLAs ha.
Mkpado akpaaka na ụzọ akpaaka maka oge nzaghachi ngwa ngwa - Ndị nnọchi anya na -enwekarị nsogbu nke obere ọrụ na -ewe oge site n'inyere ọtụtụ ndị ahịa aka. Otu n'ime ọrụ ndị a bụ iji aka na -akpado isiokwu na mkparịta ụka iji nyere ndị ọrụ aka ịchọpụta isi okwu. Site n'ike nke AI, ndị otu agaghịzi eji aka aka. Clarabridge Engage na -achọpụta isiokwu nke mkparịta ụka mmekọrịta na -ekwu maka onye nnọchi anya kwesịrị ekwesị, n'oge kwesịrị ekwesị. N'ime ime nke a, ndị nnọchianya nwere ike ịghọta ngwa ngwa onye ahịa ha ma zaghachi ngwa ngwa ma ọ bụ zigara ya onye nnọchi anya kachasị mma iji dozie okwu ahụ.
Atụmanya dị n'akụkụ ahụmịhe ndị ahịa ga -aga n'ihu na -ebili. Kama ịga n'ihu na -ejikọ ọnụ ọnụ, ụlọ ọrụ kwesịrị ịchọta otu ụzọ jikọtara ọnụ iji gboo mkpa ha.
Rịọ ngosi Clarabridge
Tags: aiBlọọgụclarabridgenchịkọta clarabridgeclarabridge na -arụ ọrụjikọtara akụkọ ndị ahịamkparịta ụkanjikwa ahụmịhe ndị ahịacxnhazi usoroinstagramomnichannelnyocha omnichannelkeonweọkwa na nyochandị ahịaechiche nyochaSMSnyocha okwuederede ederedeTwitterotu igbe mbataotuwechat
Mgbasa #GetVaccinated na -enweta nkwanye ugwu ndị isi
Ndebanye aha akwụkwọ akụkọ na profaịlụ Twitter bụ mmeri maka ndị na-ere ahịa email na ndị debanyere aha